Uchwepheshe We-Semalt Uchaza ukuthi kungani i-SEO Imfuneko Yokuba Ingxenye Ehlanganisiwe Yenkampani Yakho
Injini Yokusesha (SEO) ayikwazi ukwenziwa kanye ukuze uthole impumelelo.Ukuze kube nokusimama, i-SEO idinga ukuhlanganiswa nezinqubo eziyisisekelo zokuphatha ukuhweba kwakho kwe-e-commerce.
Iminyaka eyishumi nengxenye edlule, i-SEO professional ingathuthukisa ukusesha okuphilayoinduduzo ekamelweni lakhe. Wayengakwazi ukukhumbula ngekhanda amagama abaluleke kunazo zonke ekukopheni ngemuva kokuba esevele esephepheni, enze i-sitemap, futhi kamuva,dala izixhumanisi kuma-wikis, amasayithi we-athikili, kanye namazwana ebhulogi.
I-SEO ishicilela ukuxhumanisa igunya kanye nokubaluleka kwegama elingukhiye. Noma kunjalo, okwamanje, iukubonakala kwezinto ezibucayi kufanele kuvezwe ngokuhambisana nesakhiwo sesayithi; kwimikhiqizo abayiyoenikeziwe; indlela ababizwa ngalo - buy black fedora hat. Yingakho kudingeke ukuthi yakhelwe ekusebenzeni okuyinhloko kokusebenza kwakho kwe-digital.
I-Artem Abgarian, iMenenja Ephumelele Yempumelelo Yekhasimende i-Semalt ,unikeza ukuqonda ukuthi kungani i-SEO idinga ukuba ihlanganiswe nombono wenkampani yakho, nokuthi kufanele usebenze kanjani ukuhwebelana nge-e-commerce.
I-SEO yamanje iphathelene nethonya
Empeleni, ochwepheshe be-SEO banomthwalo wemfanelo wokunciphisa okulinganiselwe. I-SEO idingaucwaningo olunzulu olunzulu lwegama elingukhiye ngokuphindaphindiwe ukukhanyisa nge-taxonomy kanye necebo. Kudingeka ukuthi sihlolisise isayithi kaningi ukuze siqinisekeukuthi kuvumelana neseluleko ekusetshenzisweni kahle. Okuqukethwe kudinga ukulungiswa kanye nemethadatha ebhalwe okuqukethwe okusha.
Ukucebisa amanye amaqembu
Okubaluleke kakhulu kwe-SEO ukufaka iseluleko kuningi lamaphrojekthi anjengokukhiphakokuqukethwe okwamanje futhi ukuklama isigaba esisha sezwekazi.
Isibonelo, ikhasimende langibuza ukuthi kungani ukusebenza kwesigaba se-recipe kwabahhayi ngokuhambisana nokulindela. Ukubuyekezwa kwenkinga ekhonjiwe kubonisa ukuthi ukungabi khona kwezinto ezihamba phambili zokuhamba ngezinjini.Ngokuyinhloko, bekungekho ithuba lezinjini zokusesha ku-skulk enkambisweni ikhasimende elindele ukulinganisa.
Ukuxazulula kokubili kokukhathazeka kwasiza zokupheka ukuba ziphoqelele ukusesha okusesidlangalaleniesiteshini, okuyinto, ekugcineni, iphenduka ukuthenga.
Lokhu ukukhathazeka kubonisa ukuthi kwenzekani uma i-SEO isetshenziswe ngemuva kokuqedwawephrojekthi. Ukuhlanganisa i-SEO kusukela ekuqaleni kuyanciphisa izindleko zokulungisa izinkinga futhi kuthuthukisa ukusebenza kwama-zokupheka.
kusuka esitelekeni sokuhlolwa
Ukuze usebenze ngokuphumelelayo, i-SEO idinga ukuhileleka kuzo zonke izigaba kusukela kusuqhingaekuqalisweni komsebenzi wokwenza nokuhlolwa ekugcineni. Isu kufanele sitshele ngokucwaninga ngegama elingukhiye nokuhlaziywa, ikhasiamagama, i-taxonomy, kanye nokuhamba. Ukulawula okujulile kokusebenza kwamandla kanye nobuchwepheshe bebhola kufanele kululeka ekuthuthukiseni, ekuklanyeni, nasekukhethweni kwesikhulumi.
Ngamunye walezi zinto ezikhethekile angenza ngcono ukusebenza kwe-SEO noma ukulimaze.
Ukufakwa kwe-SEO ezinkambisweni zedijithali ku-e-commerce venture kukhuthazaI-value ye-SEO enhle ngezindleko ezincane.
Ama-Silos yizitha zemvelo zokuhlanganiswa ngoba zenza kube nzimaI-SEO ochwepheshe ukuhlola ukuhlanganiswa phakathi kwamaprojekthi futhi kuthonya imali engenayo eyenziwe e-commerce ehambisana nendawo yokuhweba.
Bhalisa Umthwalo wemfanelo, Ukufinyelela
Uma ufisa ukugxila ekusebenzeni kwezinto eziphilayo, kudingekaumuntu ozinikele ku-SEO ohambisa yonke indawo yokukhangisa, i-e-commerce, nemisebenzi yedijithali enhlanganweni. Ukusebenzisa iUchwepheshe wangaphakathi we-SEO uyindlela ephumelela kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi i-SEO iba yingxenye ebalulekile yenkampani yakho.